Wayszọ 5 iji hazie nchịkọta akwụkwọ gị | Bezzia
Maria onyekwere | 04/05/2021 12:00 | Home
Anyị ndị nwere mmasị n'ịgụ ihe na-edekarị aha ndị na-echere ka ị gụọ na ndepụta. Ndepụta nke na-eto na ọnụọgụ ego nke anyị na-enweghị ike ịnagide. Anyị anaghị azụta aha niile dị na ndepụta ahụ, dị anya na ya, mana anyị na-emecha na-agbakọta n'ụlọ a nchịkọta akwụkwọ dị mkpa na ịkwesịrị ịhazi n'ụzọ ụfọdụ.
Nwee ọbá akwụkwọ nke inwe ike itinye ha niile bụ nrọ nke ọtụtụ. Otú ọ dị, eziokwu, na-amanye anyị ka anyị kesaa ha n'ime ụlọ dị iche iche. Bụlagodi debe usoro na nchịkọta anyị O kwere omume site n’itinye otu n’ime usoro ise anyị na-eme atụmatụ taa. Anyi ka anyi bido?
Akwụkwọ na-ejikarị oghere ndị dị mkpa n'ụlọ anyị, nke kpatara ya mere ọtụtụ ji dị mkpa na etu esi ahazi ha na-aza ma ụkpụrụ ma ihe ịchọ mma. Jobanye abuo a siri ike ma odighi isi. Ichezọ ọ bụla ị họọrọ ime ya, nke a bụ ndụmọdụ mbụ anyị: dobe shelf na a ebe kachasị amasị maka akwụkwọ ọhụrụ batara, ndị ị na-agụbeghị.
1 Site na okike
2 Na mkpụrụedemede iji
3 Site n’aka ndị nkwusa
4 Site na agba
5 Maka ọmịiko
Mgbe a na-eri ụdị dị iche iche n'ezinụlọ (edemede, akụkọ ifo, akụkọ ndụ, ihe ncheta, ihe nkiri, uri), ịhazi akwụkwọ dịka ụkpụrụ a si dị bụ nhọrọ bara uru. Ozugbo ịkọwapụtara site na ụdị, na mgbakwunye, ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ nke mpịakọta na-emesapụ aka, ị nwere ike ịbịakwute oge ọzọ iji hazie ha na mkpụrụedemede ma ọ bụ ederede ederede. Wayszọ abụọ iji hazie ha na ha kwekọrọ ekwekọ uru na ọghọm.
Na mkpụrụedemede iji
Ikesa akwukwo akwukwo n’ile ka odi n’ime ndi kacha ewu ewu. Mainly na-agụkarị akụkọ ifo? Y’oburu na odiri ichi ichoro n’ile akwukwo gi, inwere ike idozi ya n’ulo ahia ahia ịga na aha mbụ nke aha ndị edemede. Nwere ike si otú a chọta akwụkwọ nke ọkacha mmasị gị edemede.
Ọ na-esiri gị ike icheta aha na ndị dere akwụkwọ ndị ị gụrụ? Ọ bụrụ na, dị ka m ọnwa abụọ mgbe m gụsịrị ha, ọ na-esiri gị ike icheta esemokwu ahụ, nke a nwere ike ọ gaghị abụ usoro kachasị mma maka gị. N'ihe banyere gị na nke m, usoro ị na-ahụ anya nwere ike ịdịkwu irè.
Site n’aka ndị nkwusa
Ọ bụrụ n ’ichetaghị aha ma ọ bụ ndị ode akwụkwọ mana ọ bụrụ n’ichetaghị ụdị mma dị n’akwụkwọ Dị ka ọkpụrụkpụ, agba nke spain ma ọ bụ ihe mkpuchi ahụ, usoro nhazi ọhụụ na-ahụkarị nwere ike ịbụ nnukwu enyemaka. Inghazi onye nkwusa site na ha, dịka ọmụmaatụ, nwere ike inyere gị aka ịchọta akwụkwọ ngwa ngwa.
N'ọtụtụ ọnọdụ, ọ dị mfe ịmata onye onye mbipụta akwụkwọ bụ naanị site n'ileghachi anya na spain. Ọ bụ ezigbo njirimara, dịka ọmụmaatụ, ọbara ọbara nke mkpokọta Periférica. Nakwa oroma ma ọ bụ ọbara ọbara na-acha uhie uhie na oji ojii nke ụlọ obibi akwụkwọ Acantilado ma ọ bụ akara ngosi Anagrama.
Usoro a, na mgbakwunye na nke bara uru, na-enye anyị ohere ịhazi ọbá akwụkwọ ka akwụkwọ ndị nwere ụdị agwa yiri ọnụ. Omume nke na-enye anyị a nhazi na mman'ozuzu ya n'ọbá akwụkwọ anyị.
Site na agba
A usoro na ọtụtụ ọnụnọ ugbu a na Instagram, netwọk nke ihe niile yiri ka a na-elebara ya anya, bụ ịhazi akwụkwọ na agba. Uru? Ọ bụrụ na, dị ka m, ị nwere ebe nchekwa na-enweghị mgbagha, ọ nwere ike ịbụ ogologo oge nchịkọta akwụkwọ ahụ pere mpe.
Anyị enweghị ike ileghara anya na akwụkwọ nwere ojii na oji ọcha bụ ọtụtụ. Ọ bụ eziokwu na enwere ọtụtụ ndị mbipụta akwụkwọ, ọkachasị ọhụụ na / ma ọ bụ nwere onwe ha, na nzọ na agba mana ọ dị obere ịchọta, dịka ọmụmaatụ, akwụkwọ nwere odo odo ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ slime, inye ihe atụ ole na ole. Ya mere ọ bụrụ na echiche nke ụlọ ahịa gị ọ ga-abụ ihe mara mma mana ikekwe adabaghị adaba ma ọdịghị ọtụtụ ihe ị nwere ike ime maka ya.
Akwụkwọ a ọ masịrị gị? Nwere ike ịkwado ya mmadụ? Mmetụta mmadụ nwere ịgụ ihe ụfọdụ ego ole ị ga-eji weghachi ya na ọbá akwụkwọ nwere ike bụrụ ezigbo usoro nhazi ọkwa dị ka ndị gara aga. Gịnị ma ị hazie akwụkwọ gị ụzọ atọ? Ndị masịrị gị ma ọ bụ ndị ọgụgụ ha kara akara na otu aka. N'aka nke ọzọ, ndị ị masịrị ma ọ ga-akwado ụfọdụ ndị. Na ikpe azu, ndi ahu na ihe gi n’achoghi gi nma na igharesi ma obu nye onye puru inweta ha.
You na-eji njirisi ọ bụla iji hazie nchịkọta akwụkwọ gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Wayszọ 5 iji hazie nchịkọta akwụkwọ gị